ထိပ်တန်း5ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > ထိပ်တန်း5ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
သင်ကသမိုင်းနှင့်အတူထိတွေ့ဆည်းပူးခဲ့ကြ, အတတ်ပညာ, နှင့်ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်သင်၏ယဉ်ကျေးမှုကိုယခုမြို့နယ်နိမိတ်ပြင်ပတွင်စူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ. ကံကောင်းတာက, ဘရပ်ဆဲလ်ကနေနေ့ကခရီးစဉ်အတွင်းလေ့လာစူးစမ်းဖို့အများကြီးလည်းရှိပါတယ်. ဒီတော့သိပ်ဒါ, ကျနော်တို့၏စာရင်းတစ်ခုထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပြီ5ရုံသင်တို့အဘို့ဘရပ်ဆဲလ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်!
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးခရီးသွားမှအများဆုံးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း: အသုံး
ဟုတ်ကဲ့, ဒီရုပ်ရှင်သောနေရာတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါသည် Bruges အတွက် ရိုက်ချက်ခဲ့သည်! ဒါဟာတည်ရှိသည် 100 ကီလိုမီတာအနောက်မြောက်ဘက်ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်သာ 15 မြောက်ပင်လယ်ကနေကီလိုမီတာ. Bruges ကိုလည်းအဖြစ်လူသိများသည် မြောက်ကိုရီးယား၏ဗင်းနစ်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်တစ်ဦးအကြီးအရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်5ဘရပ်ဆဲလ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ် စာရင်း. အဘယ်ကြောင့်? တဦးတည်းစကားလုံး: ခြော့ကလကျ.
၎င်း၏ကျော်ကြားအလယ်ခေတ်ဗိသုကာနှင့်တူးမြောင်းနှင့်အတူ, ဒါကြောင့်လည်းတစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေအတွက်အားနဲ့ဘယ်လဂျီယံချောကလက်ပူပွဲချင်းပြီးဖြစ်ပါသည် chocolatiers နှင့်စျေးဆိုင်, ချောကလက်၏မိတ်ဆွေတို့ကိုများအတွက်နိဗ္ဗာန်.
စားရလွန်းချောကလက်? မပူပါနဲ့. Bruges လည်းကြီးမြတ်သမိုင်းရှိပြီး လှပသောဗိသုကာ. Admiral Bruges ၏ Belfry, တစ်ဦးအလယ်ခေတ်ခေါင်းလောင်းမြို့အလယ်ဗဟိုတွင်မျှော်စင်နှင့်၎င်း၏သင်္ကေတ၏တဦးတည်း, စိန့်၏နာမည်ကျော်ဆေးရုံကြီးကိုတွေ့မြင်. ယောဟနျသ, ပြီးနောက် စိန့် Salvator ကမူဘုရားရှိခိုးကျောင်း.
ဂျန့်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်ဖြစ်ပါသည်5ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏အလယ်ခေတ်ဘဏ္treာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်လူသိများသောကြောင့်ဘရပ်ဆဲလ်မှအကောင်းဆုံးသောနေ့ခရီးစဉ်များ, အမည်ရ; ဂီတ, ပြဇာတ်ရုံ, ရုပ်ရှင်, နှင့် ရုပ်ပုံလွှာ. ဒါဟာအစဘရပ်ဆဲလ်မှစူပါနီးကပ်, သာတည်ရှိသည် 60 ဘရပ်ဆဲလ်ကနေကီလိုမီတာ, နှင့်အလွယ်တကူရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားနဲ့.
ဤချစ်စရာကောင်းသောအလယ်ခေတ်မြို့တွင်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုမှာ၎င်းကိုခြေလျင်ဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြစ်သည်, ၎င်း၏တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းဖမ်းရန် မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ, အဖြစ်က၎င်း၏တက်ကြွလေထုခံစားရရန်.
ချီးမွမ်း ယင်းဘာသာရေးသိုးသငယ်၏ချစ်စဖွယ် အတွင်းပိုင်းတည်ရှိသောဗန် Eyck ညီအစ်ကိုများ စိန့် Bavo ဘုရားရှိခိုးကျောင်း. ဂျန့်မြို့မှာ၏ Belfry သွားရောက်ကြည့်ရှု, အဆိုပါ Town Hall, နှင့်မှာမြို့ရဲ့ကုန်သွယ်သမိုင်းပိုမိုနီးကပ်စွာရ ဟောငျးငါးစျေး.
3. ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း: အမ်စတာဒမ်
သာရှိပါတယ် 200 ဘရပ်ဆဲလ်နှင့်အမ်စတာဒမ်အကြားကီလိုမီတာ, ဒါကြောင့်လှပတဲ့ဒတျချြမြို့တော်တစ်ခုမမေ့နိုင်သောနေ့ကခရီးစဉ်များအတွက်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်.
အမ်စတာဒမ်မကြာခဏသူ့ရဲ့အဘို့အလူသိများသည် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော ကဖေး! (ငါဆိုလိုတာကိုမင်းသိရင်!) ဒါပေမဲ့, သင်တို့ကိုအရူးပါစေပါဘူး. အမ်စတာဒမ်၏တစျခုဖွစျသညျ အကောင်းဆုံး5ဘရပ်ဆဲလ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ် ဒါကြောင့်လည်းသမိုင်းတစ်ဦးအိုအေစစ်သောကွောငျ့, ယဉျကြေးမှု, နဲ့အနုပညာ.
အန်းဖရန့်အိမ်မှာအတိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ Get, အဆိုပါ Rijksmuseum မှာအနုပညာနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူ, ဗန် Gogh, နှင့် Rembrandt အိမ်ပြတိုက်, နှင့်ကျော်ကြားသော Heineken အတွေ့အကြုံကိုခံစား. စွန့်စားခရီးသွားများအတွက်တစ်ဦးဆိုင်ကယ်ငှားရမ်းခြင်းနှင့်လမ်းများစူးစမ်းလေ့လာလို့ရပါတယ်, သမိုင်းဝင်အထင်ကရအဆောက်အ, အမ်စတာဒမ်နှင့်အဓိကအရက်ဆိုင်. အချိန်အတောအတွင်း, တစ်ဦးလျှော့ပေါ့ခံစားနေချိန်မှာ Romantic ထူးခြားတဲ့အမ်စတာဒမ်အတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည် လှေစီး.
လူဇင်ဘတ်နည်းလမ်းများ Lucilinburhc သို့မဟုတ်အနည်းငယ်သာခံတပ်. ရဲတိုက်ပတ်လည်ရှိနယ်မြေသို့မဟုတ်ခံတပ် Ardennes ၏ Siegfried ငါနေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်သောအခါဤဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့တွင်, လူဇင်ဘတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများ ONE ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာအစယဉ်ကျေးမှုအမတူကွဲပြားဖြစ်ပြီးကုလသမဂ္ဂနှင့်ဥရောပနိုင်ငံရေးမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍ. ဤရွေ့ကားကအကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်ဘာကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေကသာလက်တဆုပ်စာရှိပါတယ်5ဘရပ်ဆဲလ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်.
ကိုယ်ကသာကြာ 2.5 ဘရပ်ဆဲလ်ကနေနာရီရှိရမှ. သငျသညျပြီးတာနဲ့ ရထားချွတ်ခုန်, The Grand Duchy ၏မြို့တော်သို့ ဦး တည်။ Kirchberg ရပ်ကွက်နှင့်၎င်း၏ဥရောပတရားရုံးကဲ့သို့သောအရေးကြီးသောအဆောက်အအုံများကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်းဖြင့်သင်၏ခရီးကိုစတင်ပါ။, နှင့်ဥရောပကော်မရှင်. အဆိုပါ Notre Dame ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာအံ့ဩခြင်း, Gothic နှောင်းပိုင်းဗိသုကာနှင့် Renaissance အလှဆင်ပစ္စည်းများပေါင်းစပ်ထားသောမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်. ယင်းပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်နှင့်အတူ Continue ချစ်စရာကောင်းလမ်းများ. ယင်းက Grand Duke နဲ့တမြို့ခံတပ်၏နန်းတော်တစ်ဦးအကြောင်းတစေ့တစောင်းဖမ်းလက်လွတ်မနေပါနဲ့.
5. ဘရပ်ဆဲလ် မှစ. အကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း: Ypres
123 ဒကီလိုမီတာ လှပသောရှုခင်း ဘယ်လ်ဂျီယံမြို့တော်နှင့်ဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရပ်အကြားမုသာစကား. သို့သျောလညျး, သင်သည်လည်းအလွန်များလေးလံနေတာတွေ့နေရသောနေရာများသို့သွားရောက်ပြင်ဆင်ရပါမည်. Ypres ပထမကမ္ဘာစစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍနှင့်ဤနေရာတွင်ရာအရပျကိုယူသောပြင်းစွာသောအတိုက်ပွဲများစဉ်နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများရှိစစ်သားတစ်ဦးမျိုးဆက်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုမွငျလြှငျ.
အများအပြားဘယ်လ်ဂျီယံမြို့ကြီးများကဲ့သို့ပင်, အဆိုပါ စျေးကွက် အထင်ကြီးစရာကောင်းသောဗိသုကာလက်ရာများပါ ၀ င်သည်. အလယ်ခေတ်ဗိသုကာအကြွင်းအကျန်တွေအများကြီးပွနျလညျထူထောငျခဲ့ကြသောကြောင့်, ဤသည်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်. တစ်ပျြောရှငျမှတ်စုတွင်, သင်တစ်ဦးအစားကောင်းကြိုက်သူများလျှင်, ထို့နောက်သင်ရိုးရာ Flemish အစားအစာကိုခံစားခြင်းနှင့်သင်တန်း၏လိမ့်မယ်, ဘီယာ.
သငျသညျ Ypres မြို့၌အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအဘယ်သူမျှမကိစ္စ. သင်တို့၏အကြံအစည်ဝေးကမ္ဘာစစ်၏ပျက်စီးမှုများနှင့်အရှုံးထဲကနေလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ 1.
ဘရပ်ဆဲလ်ကျော်လွန်ပြီးစူးစမ်းဖို့အဆင်သင့်? ဟုတ်ကဲ့? တစ်ဦးကရထား Save သငျသညျရှိရနိုင်, အဘယ်သူမျှမဝှက်ထားသောအခကြေးငွေနှင့်ချောမွေ့စွာနှင့်စပ်ရာမရှိသောဘွတ်ကင်ဖြစ်စဉ်ကိုနှင့်အတူ. လွယ်ကူသော!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 လွယ်ကူသောနေ့ရထားဖြင့်မီလန် မှစ. Trips” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-from-brussels/?lang=my ့- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, သင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်အဆိုပါ/ပြင်ဆင်ရန်/က/ႏပိုပြီးဘာသာစကားများ.
အသုံး	ဘရပ်ဆဲလ်	နေ့ခရီးများ	ဂျန့်မြို့မှာ	လူဇင်ဘတ်	မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ	ခရီးသွား	ခရီးသွားအကြံပြုချက်များ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဂရိနိုင်ငံ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ပေါ်တူဂီရထားခရီးသွားလာ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ရထားခရီးသွား USA, ဥရောပခရီးသွား